ဌာနေအစီအစဉ်များ။ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ မှတ်ဉာဏ်မှာနေထိုင်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ | Gadget သတင်း
ဌာနေအစီအစဉ်များ။ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ မှတ်ဉာဏ်မှာနေထိုင်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
En အကျဉ်းချုပ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာများ၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ဆောင်းပါးတွဲများကိုစတင်လိုသည်။ ဒီဆောင်းပါးတွေမှာ antispyware အမျိုးမျိုး (anti-spyware) ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါမယ် Spybot ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ကြော်ငြာ - သတိထား ၎င်းသည်၎င်းသည်နေထိုင်သူပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ သို့မှသာထိုဆောင်းပါးများတွင်၎င်းတို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စပြောသောအခါခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုရှောင်နိုင်မည်။
Resident Program ဆိုသည်မှာကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ကျန်နေသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် memory resident programs အကြောင်းပြောကြသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာ (ဂိမ်း၊ p2p၊ ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်သူ၊ စကားလုံးစသဖြင့်) တွင်အသုံးပြုသောမည်သည့် application သည်မဆိုပမာဏအတော်အတန်များပြားသည်။ သို့သော်သင်ပရိုဂရမ်ကိုပိတ်လိုက်သောအခါမှတ်ဉာဏ်သည်လွတ်မြောက်သွားပြီးအခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Resident ပရိုဂရမ်များသည်သင်ထိုအချိန်ကအသုံးမပြုသော်လည်းမှတ်ဉာဏ်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေပြီးထို့ကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းသိမ်းပိုက်နိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာကိုသင်ဖွင့်တိုင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းကဲ့သို့သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုဂရမ်များကိုလည်ပတ်သည့်စနစ်နှင့်အတူ တွဲ၍ ဖွင့်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးတွင်ကွန်ပျူတာကိုသင်ဖွင့်တိုင်းတိုင်းဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်ရန်မလိုဘဲကွန်ပျူတာဖွင့်သည့် အချိန်မှစ၍ စနစ်ကိုကာကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Cသင်မြင်သည်အတိုင်း၊ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များသည်သင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါအလိုအလျောက်စတင်ပြီး၎င်းတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်မှာကောင်းသည်။ မှတ်ဉာဏ်တွင်ရှိသောအခြားပရိုဂရမ်များဥပမာအားဖြင့်လျှောက်လွှာတစ်ခုတင်ခြင်းကိုမြန်စေသည် Acrobat Reader ကို, PDF ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်အသုံးပြုသော၊ ၎င်းသည် PDF ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင့်အားစောင့်နေသည့်မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်ရှိသည်၊ ဤဖိုင်များထဲမှတစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါ program သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတင်ပြီးပြီနှင့်ဝန်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ Acrobat Reader ကိုအစားထိုးချင်တယ် Foxit PDF ကို).
Pအခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်၊ ဖြစ်နိုင်သည့်ပုံမှန်အရာတစ်ခုရှိသည်၊ ဤပရိုဂရမ်များအနေဖြင့် startup တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတင်ချင်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောရရှိနိုင်မှုကြောင့်ကွန်ပျူတာ၏ startup နှေးကွေးခြင်းဖြစ်သည် အလွန်နှေးကွေးစွာ (နှေးကွေးသောကွန်ပျူတာ၏ပြoneနာတစ်ခုဖြစ်သည်) ဤအရာအားလုံးဖြစ်သည် နေထိုင်သူအစီအစဉ်များ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ system ထဲမှာရရှိနိုင်မှတ်ဉာဏ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုလောင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အစပိုင်းတွင်အကျိုးရှိပုံရသည့်အရာသည်ကွန်ပျူတာနှေးကွေးသောကြောင့်အဆင်မပြေမှုအဖြစ်အဆုံးသတ်သွားသည် စီပီယူ မလိုအပ်ဘဲနှင့်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လည်း (အထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်) ပရိုဆက်ဆာကိုအလွန်အကျွံအပူပေးသည်။
Pမှန်ပါသည်၊ သင်၏ desktop ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ကိုကြည့်ပါက Windows XP တွင် icon များစွာတွေ့ရလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် startup မှစတင်ပြီး memory resident ဖြစ်နေသော program ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အချို့သည် antivirus ကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းအချို့သည်မလိုအပ်ဘဲအရင်းအမြစ်များကိုသာသုံးစွဲကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် install လုပ်ဆိုပါစို့ Winamp ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမင်းကကွန်ပျူတာနဲ့တေးဂီတကိုနားထောင်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ၊ မင်းကကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ အဲဒါကိုအသုံးမပြုဘူး၊ Winamp ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာသူကကွန်ပျူတာနဲ့အမြဲတမ်းစဖွင့်တာကြောင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကစားသမားကိုအသုံးပြုရန်စောင့်နေပြီးဖြစ်သော်လည်းတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သာအသုံးပြုပါ ဒီပရိုဂရမ်ကိုသင်မသုံးတော့ရင်ဘာလို့မှတ်ထားရမှာလဲ။။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်နေ့စဉ်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ပင်၎င်းသည်အစမှအစမှသည်မှတ်ဉာဏ်မှစတင်ခြင်းအကြားကွာခြားချက်သည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကစားသမားကိုသင်အသုံးမပြုတော့သည့်အချိန်များ၌အရင်းအမြစ်များကိုရယူလိမ့်မည်။ PC စတင်ဖွင့်သည့်အခါပရိုဂရမ်ကိုစတင်ခြင်းနှင့်၎င်းတွင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမဝင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းကပိုကောင်းမည်မဟုတ်လော။.
ကွန်ပျူတာစတင်ဖွင့်သည်နှင့် program တစ်ခုမှတ်ဉာဏ်ထဲမ ၀ င်စေရန်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း
Pပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမ ၀ င်စေရန်နှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးသောတစ်ခုကိုသာတွေ့လိမ့်မည်။
ပထမ) "Start" menu ကိုသွားပြီး "Run" ကိုနှိပ်ပါ။
ပထမ) Run လို့ခေါ်တဲ့ ၀ င်းဒိုးပွင့်လာလိမ့်မည်။ သင်ရိုက်ထည့်ရမည် "Msconfig" (ထိုကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ) ။ ထို့နောက် "Accept" ကိုနှိပ်ပါ။
ပထမ) ဝင်းဒိုး« System configuration utility »ပွင့်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်“ Start” ဆိုသောအပေါ်ဘက်ရှိနောက်ဆုံး tab ကိုနှိပ်ပါ။
ပထမ) သင်၏ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါ load လုပ်သောပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီ။
ပထမ) ၎င်းတို့မှတစ်ခုခုကိုမတင်မိစေရန်သင်သည်သက်ဆိုင်ရာအကွက်ကိုအမှတ်အသားပြုပါ။ Winamp ကိုတားဆီးရန်ဥပမာအားဖြင့် "winampa" ဘေးတွင်ပေါ်လာသော box ကို 'winamp agent' နှင့် startup တွင်တင်ထားသော Winamp program နှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုဖြုတ်ပါ။
ပထမ) အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့မဖွင့်လိုသောပရိုဂရမ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအကွက်အားလုံးကိုအမှတ်အသားမပြုပါက“ Apply” ကိုနှိပ်ပြီး“ Close” ကိုနှိပ်ပါ။ သင်သည်အရူးကဲ့သို့သောအကွက်များကိုမဖြုတ်ပါနှင့်သင်သိသောသူများကိုသာအစမှဖယ်ရှားလိုသောပရိုဂရမ်များနှင့်သာကိုက်ညီရန်အရေးကြီးသည်။ “ Close” ကိုနှိပ်ပြီးပြီးနောက်အောက်ပါ ၀ င်းဒိုးပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်ယခုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းစနစ်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းအကြားရွေးချယ်ရမည်။
Bကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်သောအခါ system configuration utility ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်မပြရန်နှင့် ၀ င်းဒိုးကိုပိတ်ရန်ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောပရိုဂရမ်များသည်သင်ကို ပြန်၍ မတပ်ဆင်တော့ပါ။ သူတို့သည်၎င်းတို့ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အရင်းအမြစ်များစားသုံးခြင်းမှတားဆီးရုံသာဖြစ်သည်။ သင်မပိတ်သင့်သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်အခြားလည်ပတ်ရေးစနစ်၏အခြားသူများကဲ့သို့သောနေထိုင်သူပရိုဂရမ်များရှိကြောင်းသတိရပါ။ မည်သည့်မေးခွန်းများအတွက်မှတ်ချက်များကိုသုံးပါ။ စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » ဌာနေအစီအစဉ်များ။ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘာတွေလဲ၊ မှတ်ဉာဏ်မှာနေထိုင်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
37 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
hola အဲဖရက် သင်ဒီမှာရှိနေတာ၊ စာမျက်နှာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုဝမ်းသာပါတယ် မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေ၊ မင်းရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနေ့စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၇ ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်တွေကနေကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါပြီ။ ခင်ဗျားရဲ့စာမျက်နှာကိုတွေ့ပြီ။ ၄ နာရီကြာပြီ။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအရမ်းငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဖတ်ရလွယ်ကူတယ်၊ ပညာရေးလည်းကောင်းတယ်။ သင်နှင့်သင်၏သင်ကြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Alfredo (Arequipa - ပီရူး - တောင်အမေရိက)
မင်္ဂလာပါအဲဖရက်ဒို၊ antivirus သည်မည်သည့်အပိုင်းသို့မဟုတ်အပိုင်း၏မည်သည့်အပိုင်းတွင်ရှာဖွေသည်ကိုမေးမြန်းလိုသည်။
အခြားနေရာမှာ com command ပါရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအပိုင်းကိုဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်လုံးဝမရပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်ဖြေဆိုရန်မျှော်လင့်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သည်အခက်အခဲသိပ်မရှိပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရပါတယ် ပတေရုသ ပုံမှန်အားဖြင့် Windows ၏အစပိုင်း၌တပ်ဆင်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်စေသည့်ပြင်းထန်သောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပရိုဂရမ်များကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ မင်္ဂလာပါ။
ကောင်းပြီ, ငါဒီစာမျက်နှာကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်အစေခံခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယများစွာရှိခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာ မှလွဲ၍ အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အားထင်ရှားခဲ့သည်
ရှင်းပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသည်လည်း Outlook Express သည်နေထိုင်သူဟုတ်၊ မဟုတ်အခြားပရိုဂရမ်များကို သုံး၍ ၎င်းသည် boot configuration မှဖယ်ထုတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းသိလိုသည်။ ထို့အပြင် screensavers များနှင့် desktop နောက်ခံများကူးယူထားသောဖိုင်တွဲများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
လူးဝစ်ငါသိတဲ့ Outlook Express ကွန်ပျူတာစဖွင့်တာနဲ့မစဘူး။ မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ဖိုင်တွဲသည်သင် download လုပ်သည့်အချိန်တွင်သင်ရွေးချယ်သောတည်နေရာပေါ်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ မင်္ဂလာပါ။
နေထိုင်သူအစီအစဉ်များအပေါ်အင်ဖိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ Nacho ။
မင်္ဂလာပါရှလကာရည် - မင်းမှာစမတ်ကျတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ငါအမြဲတမ်းရွေ့လျားနေတဲ့ screen saver ရှိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါပြီးပြီ။ မက္ကစီကိုမှနှုတ်ဆက်သည်။ ရှေ့ဆက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သင်ပေးပါ။
Dani သင်မေးသော့ချက်သည် Shift (အကြီးအကြီး), မြှားနှင့်အတူတ Caps Lock ကိုမ။ အကယ်၍ သင်သည် Windows startup တွင်ဖိထားပါက Start တွင်ပါဝင်သောပရိုဂရမ်များသည် load မည်မဟုတ်ပါ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
Fer lopez ဟုသူကပြောသည်
ဤ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည့်အနည်းငယ်သာအရာဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မဓိprecision္ဌာန်ကျကျသူတို့တင်ပြသောအချက်အလက်များတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
သူတို့ကိုတွေ့ရတာ ၀ မ်းသာပါတယ်။
Fer Lopez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ မင်းရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအဲဒီမှာတွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်တော် ၀ မ်းသာမိတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးစာမျက်နှာများတွင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းသံသယရှိပါတယ်။
နုတ်ဆက်ပါတယ် ...... .and ကံကောင်းပါစေ။
ဟယ်လိုဟေး၊ ဒါကငါ့အိမ်စာကိုအများကြီးနားလည်စေတယ်၊ ​​မင်းဒီလိုသုတေသနမျိုးလုပ်တာကောင်းတယ်
ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပိုသိချင်ပါတယ် နုတ်ဆက်ပါတယ် !!
ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။ ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားရှာသော်လည်းမတွေ့ပါ
Hanna almanza ဟုသူကပြောသည်
Hanna Almanza အားစာပြန်ပါ
သင်ခန်းစာတွေကအရမ်းကိုလွယ်ကူပြီးလွယ်ကူတယ်။ ငါ antivirus ကဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်၊ သူတို့က Kasperky အကြောင်းငါ့ကိုဘာတွေပြောကြလဲ၊ ငါမှာဒီသော့ရှိရင်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် Kaspersky မှသော့များကိုကူးယူနိုင်သည့်လိပ်စာပေးပါ
ဒါဟာငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဝင်ခြင်းနှင့်ငါ guidto kuidate
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုကောင်းကောင်းအကျွေးပြုပြီးကျောင်းမှာလက်တွေ့ကျတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့သူမလိုအပ်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ
jhon ကြက်သား ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းစွာရှင်းပြခဲ့သည်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ post ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
jhon pollo အားပြန်ကြားပါ
အမှန်တရားနှင့်ကြိုးစားမှုကိုမပေးရခြင်းဖြစ်သည်၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုရိုးရှင်း။ ရှင်းလင်းသောနည်းဖြင့်ရှင်းပြရန်ဤကဲ့သို့သောရေးသားချက်များပိုမိုလိုအပ်သည်။
ကွန်ပျူတာကိုစဖွင့်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေဘာတွေလိုချင်လဲ၊ မေးချင်တယ်ဗျ။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးမှမဟုတ်တာ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
emm, noc ။ ဟုသူကပြောသည်
emm, noc ကိုပြန်ကြားပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလိုချင်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းယနေ့တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တွက်ဆနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ operating system သည် XP မဟုတ်သော်လည်း Vista ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်မနိုင်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
AlbaMercury ၃၅၈ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် The Sims2ကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်အမင်းခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ နေထိုင်သူပရိုဂရမ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာမှတ်ဉာဏ်မရှိခဲ့ပါ !!
* မင်းကအဲဒါကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြတယ်၊ အဲဒါကငါဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံကြောင်တောင်မှပြproblemsနာမရှိဘဲရှာဖွေနိုင်အောင်လုပ်တယ် !! ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ!!